Nagu saabsan
QOMO waa hormuudka summada Maraykanka iyo soo saaraha caalamiga ah ee tignoolajiyada bandhigga waxbarashada iyo shirkadaha.Laga soo bilaabo kamaradaha doc-cams ilaa shaashadaha taabashada is-dhexgalka, waxaanu nahay lammaanaha kaliya ee la yimaada khad badeecad ah oo si buuxda isku dhafan (oo la qabsan karo) taas oo sahlan in la isticmaalo oo sahlan miisaaniyadda. Ka dib markaan tan samayno ku dhawaad ​​​​20 sano, waxaan fahamsanahay sida loo shaqeeyo qof walba laga bilaabo maamule sare iyo CTO-yada ilaa maamulayaasha degmada iyo macalimiinta fasalka.QOMO waxay keenaysaa xalalka ugu fudud, ee la fahmi karo ee qof walba ka caawiya inuu ku raaxaysto waxa ugu fiican.
Qomo waxaa ka go'an in ay horumariso tayada waxbarida iyo hufnaanta shaqada aduunka oo dhan.Waxaanu ku siin doonaa xalka ugu fudud, ee la fahmi karo ee kaa caawinaya inaad ku raaxaysato waxaad samaynayso.
Oo ku xidh dhammaan ilaha waxbarashada madadaalada qalabka elegtarooniga ah ee Qomo smart.
Waa maxay sababta loo doortay Qomo?
Kooxdayada R&D waxay ka kooban yihiin farsamoyaqaanno khibrad ka badan tobanaan sano u leh qalabka iyo software-ka.Xilli kasta waxaanu ururin doonaa jawaab celinta macaamiisha iyo shuruudaha suuqa si aan u cusboonaysiino alaabadayada si aan u daboolno baahida suuqa.Waxaan hiigsaneynaa inaan horumarino alaabada ugu xariifsan oo leh qiimaha ugu dhaqaalaha badan iyo tayada ugu fiican!
Ku aqbal OEM/ODM Miisaaniyadaada
Soo-saare ahaan, waxaanu aqbalnaa OEM iyo ODM kuwaas oo buuxin doona bartilmaameedkaaga iyo suuqa.Waxaad hubaal ahaan u isticmaali kartaa qalabkayada qalabka elegtarooniga ah ee casriga ah si aad ula dhexgasho software-kaaga.Qomo-na waxa uu bixin doonaa xalka ugu fiican ee fasal caqli-gal ah.U fududee ardayda inay ka qaybgalaan fasalka xishood la'aan.
Alaabooyinka xariifnimada leh ee Qomo waxay kaa caawinayaan inaad wax barato, la xidhiidho oo aad wada-shaqayso si ka fudud oo waxtar leh intii aad waligaa moodaysay.Markaad go'aansato inaad Qomo u doorato alaab-qeybiyahaaga, waxaanu ku siin doonaa adeeg buuxa oo isticmaalka hagaha iyo taageerada.
Sannad kasta, waxaanu ka qayb gali doonaa ISE/Infocomn.Waxaad awood u leedahay inaad si fudud u hubiso alaabtayada xitaa ma aadan booqan warshadeena.